Myanmar Visa Credit Card Informaiton
Mogok is open to tourist afteradecade
Afteradecade, there comes the great news of Mogok where the restricted entry has been uplifted. Foreign visitors can now visit Mogok while visiting Mandalay as it is just 200km north of Mandalay anda5 hours drive through the highway. Few months ago, the 800th anniversary was celebrated onagreat scale where people from different towns and cities participated in this festival. It was held for3days from 29th of March to 31st of March 2018. Mogok is looking forward to welcome foreign tourist.
Credit : Tint Nain post မှ ကူးယူ ဖော်ပြ ပါသည် ။
ပ လပ် စ တစ် ကပ် ပြား လေး ပေါ် မှာ VISA / Master Card လို့ ရေး ထား တိုင်း - Credit card မ ဟုတ် ပါ ။
လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး ကို
. . . အ ရည် အ ချင်း
. . . လုပ် ရည် ကိုင် ရည်
. . . အ ကျင့် စာ ရိ တ္တ ဖြောင့် မတ် မှု
ဒီ ( ၃ ) ခု နဲ့ တိုင်း တာ ပါ တယ် ။
လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး နဲ့ က မ္ဘာ ပေါ် က Credit Card များ . . . . . . . . .
နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် တွေ မှာ အ နေ ကြာ လို့ - နိုင် ငံ ခြား ကို အ ထင် ကြီး ပြီး ရေး တာ မ ဟုတ် ။ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး ကို - စ နစ် တ ကျ ဘယ် လို တွက် ချက် နိုင် တယ် ဆို တာ သိ စေ ချင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ် ။
လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး ကို -
ဒီ ( ၃ ) ခု နဲ့ တိုင်း တာ ပါ တယ် ။ ဘယ် လို တိုင်း သ လဲ ကြည့် ရ အောင် ။
Credit card စ နစ် ။
လူ ငယ် တ ယောက် ကျောင်း ပြီး လို့ / ဒါ မှ မ ဟုတ် ကိုယ် ပိုင် လုပ် ငန်း နဲ့ အ လုပ် စ လုပ် ပြီ ဆို ပါ စို့ - ဘာ Credit card မှ မ ရှိ သေး ပါ ။ ကုန် တိုက် ကြီး တွေ ( စိန် ဂေ ဟာ / City Mart လို Super Market လို ) မှာ ဈေး ဝယ် ရင်း က နေ - ဒီ လုပ် ငန်း တွေ က အ ကြွေး ဝယ် လို့ ရ တဲ့ / ကု မ္ပ ဏီ ကဒ် တွေ ထုတ် ပေး ပါ တယ် ။ Line of Credit ခေါ် ပါ တယ် ။ ပိုက် ဆံ ပါ စ ရာ မ လို - ပ လပ် စ တစ် ကဒ် နဲ့ဝယ် လို့ ရ တော့ / ပို ဝယ် ဖြစ် တယ် ဆို တာ လည်း မှန် ပါ တယ် ။ ဒါ က တော့ . . . ကိုယ့် အ တိုင်း အ ဆ နဲ့ ကိုယ် ထိန်း ပေါ့ ။ ဒီ မှာ တင် - လူ တစ် ယောက် ရဲ့ " စ နစ် " က စ ပြီ / ကိုယ် ဘယ် လို လူ မျိုး လဲ ?
တ လ လုံး သုံး ခဲ့ သ မျှ - လ ကုန် ရင် အ ကုန် ပြန် ဆပ် / ဘာ အ တိုး မှ ပေး ရန် မ လို ပါ ။ အ ချိန် ( ၁၀ ) ရက် ပေး ထား ပါ တယ် ။ အ ကုန် ပြန် မ ဆပ် နိုင် သေး ရင် - Balance ရဲ့ ၁၀% ပြန် ဆပ် / ကျန် ငွေ အ ပေါ် အ တိုး ပေး ရ ပါ မယ် ။ အ တိုး က တော့ များ တယ် / ဘဏ် တိုး ထက် ( ၂ ဆ ) ကျော် မယ် ။
ကဒ် ပြား ထုတ် ပေး တဲ့ ကု မ္ပ ဏီ က - သင့် နံ မည် / သင့် Account ကို အ ကြွေး ကွန် ယက် ( Credit Network ) မှာ ထည့် ပေး လိုက် ပါ ပြီ ။ ဒီ လို နဲ့ ( ၆ ) လ / တစ် နှစ် ကြာ လာ တော့ . . . Credit Score မှာ သင် ရ လာ တဲ့ " ကိန်း ဂ ဏန်း " က တက် လာ တယ် ပေါ့ ။ ဒီ အ ချိန် မှာ . . . ဘဏ် တိုက် ကြီး တွေ / လုပ် ငန်း အ ကြီး ကြီး တွေ က - သူ တို့ ရဲ့ Credit card ကို လက် ခံ ဘို့ ကမ်း လှမ်း လာ ပါ ပြီ ။ သူ တို့ ဆီ မှာ ပိုက် ဆံ အပ် ရန် / Account ဖွင့် ရန် မ လို အပ် ပါ ။ သူ တို့ ဘဏ် / ကု မ္ပ ဏီ ရဲ့ - VISA / MasterCard တွေ ပေါ့ ။ ဒီ ကဒ် တွေ ကျ တော့ ဆိုင် တ ဆိုင် ထဲ မှာ တင် မ ဟုတ် တော့ ဘဲ - တ က မ္ဘာ လုံး မှာ သုံး လို့ ရ ပါ တယ် ။ စ စ ချင်း . . . ထုတ် ပေး တဲ့ Standard / Classic cards တွေ မှာ တော့ - $ 3000 လောက် အ ထိ / အ များ ဆုံး သုံး စွဲ ခွင့် ရှိ မှာ ပါ ။ နှစ် တွေ ကြာ လာ သည် နှင့် အ မျှ - Credit Limit = $ 6000 / $ 1,0000 နဲ့ $ Unlimited ထိ တက် လာ မှာ ပါ ။ Classic card က နေ Gold card အ ဆင့် / Platinum card အ ဆင့် တွေ ဖြစ် လာ ပါ မယ် ။ သင့် ရဲ့ Credit Score က လည်း မြင့် သ ထက် မြင့် လာ ပြီ ပေါ့ ။
Line of Credit ကို ကုန် တိုက် ကြီး တွေ က ထုတ် ပေး သ လို - ကား တစ် စီး ကို အ ရစ် ကျ စ နစ် နဲ့ ဝယ် တာ မျိုး / အိမ် တိုက် ခန်း အ ရစ် ကျ ဝယ် တာ မျိုး တွေ မှာ လည်း / ထုပ် ပေး နိုင် ပြီး သင့် နံ မည် ( Account ) ကို Credit Score ရ လာ အောင် လုပ် ပေး ကြ ပါ တယ် ။Credit Card တွေ က တော့ အ များ ကြီး ပေါ့ ။ American Express / VISA / Master / Discover / Diners' Club စ သည် ဖြင့် . . . ။ လုပ် ဆောင် ပုံ က တော့ အား လုံး အ တူ တူ ပါ ဘဲ ။ ဒီ Credit Cards တွေ အား လုံး က Credit Network တစ် ခု ထဲ က နေ - သင့် Credit Score ကို ထိန်း နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ကြွေး ပြန် မ ဆပ် လို့ / လိမ် ညာ လို့ . . . " Bad Credit " ဝင် သွား ပြီ ဆို ရင် တော့ - နောက် ထပ် ဘယ် Card မှ မ ရ နိုင် တော့ ပါ ။ You are DONE.
သင့် တန် ဘိုး ကို ပြ တဲ့ Credit card
သင့် မှာ Standard card လောက် ဘဲ ရှိ ရင် - ကု မ္ပ ဏီ သေး သေး / ဈေး ခပ် ပေါ ပေါ ကား လောက် ငှါး စီး လို့ ရ ပါ မယ် ။ ဒါ တောင် အ ပေါင် သ ဘော မျိုး / အာ မ ခံ တွေ ဘာ တွေ ဝယ် ခိုင်း ကောင်း ဝယ် ခိုင်း ပါ လိမ့် မယ် ။Gold card လောက် ဆို ရင် - Toyota Corolla နဲ့ အ ထက် / ကား တော် တော် ကောင်း ကောင်း တွေ / အာ မ ခံ မ ယူ ဘဲ ငှါး လို့ ရ ပါ ပြီ ။ Credit card က အာ မ ခံ ထား လို့ ပါ ။Platinum နဲ့ Unlimited Card ကိုင် ထား ရင် တော့ - လက် ထဲ မှာ ငွေ ရှိ စ ရာ မ လို ။ Ferrari / Lamborghini / Porsche / Aston Martin ကြိုက် တဲ့ ကား သာ ပြော - သင် စီး နိုင် ပါ ပြီ ။ငွေ မ လို / သင့် တန် ဘိုး က ဒါ ပါ ဘဲ ။ သင့် ရဲ့ ' အ ရည် အ ချင်း ' . . သင့် ရဲ့ ' လုပ် ရည် ကိုင် ရည် ' . . သင့် ရဲ့ ' မှန် ကန် တဲ့ အ ကျင့် စါ ရိ တ္တ ' တွေ က - သင့် ဘ ဝ ကို မြှင့် တင် ပေး လိုက် ပါ ပြီ ။
Credit Score ဆို တာ အ ခွင့် အ လမ်း ။
ဥ ပ မာ - အိမ် ခန်း ငှါး နေ ရ တဲ့ ဘ ဝ က နေ / ငွေ လေး စု မိ ဆောင်း မိ လာ လို့ / အိုး ပိုင် အိမ် ပိုင် နဲ့ နေ ချင် ပြီ ဆို ပါ စို့ ။ ငွေ တ လုံး တ ခဲ ထဲ ပေး အိမ် ဝယ် ဘို့ ဆို တာ သိပ် မ လွယ် လှ ပါ ။ အိမ် ကောင်း ကောင်း ဝယ် မယ် ဆို ရင် - ဒေါ် လာ သိန်း ဂ ဏန်း အ ထိ - ငွေ ချေး ရ ပါ တော့ မယ် ။ ဘဏ် တွေ က လည်း ချေး ချင် ကြ ပါ တယ် / အ တိုး ရ မဲ့ ကိ စ္စ ဘဲ ။ ခက် တာ က - ဒီ လူ ကို ဘယ် လို ယုံ ကြည် ပြီး / ဒိ လောက် များ တဲ့ ငွေ တွေ ချေး ရ မှာ လဲ ။ Credit System က ရှိ နေ တော့ - စုံ ထောက် ငှါး ပြီး / သင့် နောက် ကြောင်း လိုက် စုံ စမ်း ရန် မ လို ပါ ။ သင့် ရဲ့ Credit Rating ကို ရှာ ကြည့် လိုက် တာ နဲ့ - Loan approved ကို မိ နစ် ပိုင်း အ တွင်း မှာ လုပ် / ချက် ချင်း ငွေ ထုတ် ချေး ပေး လိုက် နိုင် ပါ တယ် ။
နောက် ဥ ပ မာ တ ခု . . . အ ဆက် အ သွယ် ရ လို့ / အ ကြံ ဥာဏ် ကောင်း ရ လာ လို့ - လက် ခ စား လုပ် နေ ရာ က နေ / ကိုယ် ပိုင် လုပ် ငန်း တည် ထောင် တော့ မယ် ဆို ပါ စို့ ။ အ ရင်း အ နှီး က အ များ ကြီး လို လာ ပြီ ။ ဘယ် လို ရှာ မ လဲ ? Credit ကောင်း နေ သူ တ ယောက် အ တွက် က တော့ ပူ စ ရာ မ လို ပါ ။ ဟို ဘဏ် က သူ့ ဆီ က ငွေ ယူ ပါ / ဒီ ဘဏ် က သူ့ ဆီ က ယူ ပါ - အ တိုး လျှော့ ပေး မယ် / ( ၆ ) လ ဆိုင်း ငံ့ ပေး မယ် ဆို ပြီး / Offer တွေ က ဝိုင်း ဝိုင်း လည် နေ တာ ပါ ။ မြန် မာ ပြည် က သီ ချင်း တ ပုဒ် လို ပေါ့ - " ခါ ချ နေ ရ တယ် " ။Credit ပို ကောင်း လာ သည် နှင့် အ မျှ - ချေး ငွေ အ ပေါ် ပေး ရ တဲ့ / ဘဏ် အ တိုး နှုန်း က လည်း လျော့ ကျ သွား လိုက် တာ / နောက် ဆုံး တော့ ပါး ပါး လေး ဘဲ ပေး ရ ပါ တော့ တယ် ။ သင့် အ တွက် အောင် မြင် မှု တွေ ရ လာ ဘို့ လမ်း ခင်း ပေး လိုက် သ လို ပါ ဘဲ ။ ဒါ ကြောင့် . . . အ ကြံ ဥာဏ် ရှိ သူ / အ လုပ် ကြိုး စား သူ တွေ အ တွက် က တော့ - Credit Score ဆို တာ ဖွင့် ပေ ထား တဲ့ အ ခွင့် အ လမ်း ပါ ။
Credit card က ဘယ် လို အာ မ ခံ သ လဲ ?
ကျ နော် US ကို ရောက် ခါ စ - လမ်း တွေ သိပ် မ ကျွမ်း သေး ခင် ပေါ့ ။ Corolla ကား အ သစ် လေး တ စီး ငှါး မောင်း လာ ရင်း - Hollywood မှာ ကိုယ် ကွေ့ ရ မဲ့ လမ်း ကို မြင် မြင် ချင်း / အ ချက် ပြ မီး မ ဖွင့် ဘဲ ကွေ့ ဝင် လိုက် ပါ တယ် ။ နောက် က လိုက် လာ တဲ့ အ မေ ရိ ကန် ကား ကြီး ကြီး တ စီး က - နောက် ဘက် ဒေါင့် ကို တိုက် မိ ပြီး ကျ နော့် ကား Bumper ပြုတ် ထွက် သွား ခဲ့ ပါ တယ် ။ တိုက် သွား တဲ့ ကား က ခပ် ကြီး ကြီး ဆို တော့ သိ ဟန် တောင် မ ပေါ် ပါ ။နောက် တ နေ့ . . . ကား ပြန် အပ် တော့ အ ကြောင်း စုံ ကို ရှင်း ပြ ပါ တယ် ။ ကား ငှါး တဲ့ ကု မ္ပ ဏီ က Credit card ကို တ ချက် ကြည့် လိုက် ပါ တယ် ။ " Don't worry , your card take care of it " လို့ ပြော ပြီး / ကား ကို လက် ခံ ထား လိုက် ပါ တယ် ။ လ ကုန် တော့ - VISA Card ရဲ့ Statement မှာ ကား ပြင် စ ရိတ် $ 120 ပေး လိုက် ရ ကြောင်း သာ ဖေါ် ပြ ထား ပြီး / ကျ နော့် ဆီ က တ ပြား တ ချပ် မှ ပြန် မ တောင်း ပါ ။
" သ တိ " - မြန် မာ ပြည် က Debit card တွေ နဲ့ မ မှား စေ နဲ့ ။
ပ လပ် စ တစ် ကပ် ပြား လေး ပေါ် မှာ VISA / Master Card လို့ ရေး ထား တိုင်း - Credit card မ ဟုတ် ပါ ။ မြန် မာ နိုင် ငံ ဘဏ် တွေ က - ကိုယ့် Account မှာ ငွေ ရှိ သ လောက် ကပ် ပြား ပြ ပြီး သုံး လို့ ရ အောင် / Debit card ( VISA / Master ) တွေ ထုတ် ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ် ။ ကိုယ့် ငွေ Balance မ ရှိ ရင် သုံး မ ရ တော့ ပါ ။သူ တို့ က ပြော ချင် ပြော မယ် - ဂျ ပန် တို့ / ဟောင် ကောင် တို့ နဲ့ ချိပ် ဆက် ပေး ထား ပြီး / နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် တွေ မှာ သုံး လို့ ရ တယ် / ဘာ ညာ ပေါ့ ။ သုံး လို့ ရ မယ် လေ - အဲ ဒီ နိုင် ငံ မှာ ချိပ် ထား တဲ့ ဘဏ် တိုက် ကို လိုက် ရှာ ပြီး ငွေ ထုတ် ယူ နိုင် မယ် ပေါ့ ။ လမ်း ဘေး က ဆိုင် တ ဆိုင် မှာ ခေါက် ဆွဲ ကျော် မှာ စား ပြီး / အဲ ဒီ Card နဲ့ ပေး ကြည့် ပါ လား - ရ / မ ရ ။
ကျ နော့် ကို Credit card ထုတ် ပေး ထား တဲ့ ဘဏ် တိုက် ကြီး တွေ မှာ - ကျ နော့် Account တွေ မ ရှိ သ လို / ကျ နော့် ပိုက် ဆံ တ ပြား တ ချပ် မှ အပ် မ ထား ပါ ။ ဒါ ပေ မဲ့ ဒီ ကပ် တွေ က - လမ်း ဘေး ဆိုင် က နေ Five Stars Hotel ကြီး တွေ ထိ / Worldwide သုံး လို့ ရ ပါ တယ် ။ ဘယ် လို ကား မျိုး စီး ချင် လဲ ? ငွေ ထုတ် မ လား ? ကိုယ် ရောက် နေ တဲ့ နိုင် ငံ ရဲ့ ATM စက် တွေ မှာ - တစ် နေ့ လျှင် US $ 2000 နေ့ စဉ် ထုတ် လို့ ရ ပါ တယ် ။ နှစ် ပါတ် အ ထိ ပေါ့ ။ ဒါ မျိုး ကဒ် ကို Credit card လို့ ခေါ် ပါ တယ် ။
မြန် မာ နိုင် ငံ ဘဏ် တိုက် ကြီး တွေ ကိုယ် တိုင် က - Debit Card ကို / ဒါ Credit Card ပါ ဆို ပြီး ထုတ် ပေး နေ ရင် တော့ . . . ဖြောင့် မတ် တဲ့ အ ကျင့် စာ ရိ တ္တ ကို ဘယ် လို တည် ဆောက် ကြ မှာ လဲ ?
Credit Card - Debit Card ကွဲပြား ခြားနား ပုံကို စာရေးသူ ကို တင့် နိင်မှ ဗဟုတတရစေရန် လေ့လာလိုသူများအတွက်
CREDIT CARDS, TRAVELER'S CHEQUES CURRENCIES, EXCHANGE RATES
Payment Gateway for Master Card Acceptance Online Merchant account launched.
Payment Gateway for Online Merchants is launched by the CEO of CB Bank yesterday. Merchants in Myanmar can now accept Master Card payments through CB bank. The MDR (Merchant Discount Rate) is 6% and the merchant must haveacompany account at CB bank. That means business without company account cannot have online merchant account for the time being. This Master Card Online Merchant account is for the business that target Master Card holders which means selling to foreigners. Many sellers in Myanmar who target foreigners may not have proper company registration to be eligible for this Merchant account. However some companies like Myanmar Mart already made agreement with Banks to cater for such market segment.
Visa made introduction to its services as New Way to Pay and Be Paid
Kun Dan explain about means of getting payment with Visa card and its market share. He also explained why Visa card should be accepted and finishing with questions and answer.
Ms. JJ explained more about branding and the benefits of accepting cards, what is the support from Visa.
There were some local leading banks who already offer card services to their clients.
The meeting ended with Free and Easy discussion over coffee.
VIsa-New way to Pay and Be Paid
Latest information about using credit card in Myanmar (Burma) - December, 2012.
22nd December, 2012. Yangon. Myanmar has been revamping its financial system significantly in recent months. Authorized Exchange counter are allowed to those companies who can deposit 30 million Kyats (roughly 35,000 US$). Major financial institutions like Master and Visa are active in Myanmar. Visa, MasterCard, China UnionPay and Japan Credit Bureau have been granted permission by the Central Bank of Myanmar.
Master Card is the first to be available in Myanmar in collaboration with CB Bank (Cooperative Bank) on the CB Bank's ATMs on 6th September, 2012. There will be 5000 Kyats fee for each transaction.
Visa Inc. announced on 3rd December that it has signed its first licensing agreements in Burma with three banks: Kanbawza Bank, Cooperative Bank and Myanmar Oriental Bank.
"Visa Card Holders, starting from 21 December 2012, can withdraw Myanmar Kyat from any KBZ ATM" KBZ announced on their Facebook page.
CB Bank is working hard to provide Point of Sale facilities to shops in Myanmar targeting the tourist arrival which saw 40% rise year on year statistics. E-commerce facility where Myanmar online shops can charge Visa and Master Card will come last when Myanmarvisa interviewed CB bank official in December.
© Copyright 2003- 2012 WWW Media Co. Ltd. Copyright Notice : The information above is collected, compiled and prepared by WWW Media through its visitors. All or part of the information (Credit cards, TRAVELLER'S cheques Currencies, Exchange Rates, Frequently Asked Questions) can be used in its entirety by includingalink to www.myanmarvisa.com. It is required to send us an notification to visa@mail4u.com.mm if reproduced in any literature or web site.
Last Modified : 26 July 2014 | HPA